Plex.Earth ukhuphela imifanekiso kwiGoogle Earth Ngaba akukho semthethweni? -Izixhobo zeGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-Plex.Earth ukulanda imifanekiso esuka kwiGoogle Earth Ngaba akukho mthethweni?
Siye sabona ngaphambi kweenkqubo ezithile ezikhutshelwe imifanekiso kuGoogle Earth. Ukuchazwa kwangaphambili okanye akunjalo, ezinye azisekho njenge StitchMaps y GoogleMaps Downloader.
Ngenye imini umhlobo wandibuza ukuba yiyiphi i-Plex.Earth eyenzeka kwi-AutoCAD iphula imigomo yeGoogle.
Yiyiphi imigomo yeGoogle
(c) ukukhutshwa, ukulawulwa kwezithuthi okanye izicelo ezifanayo. Akuvunyelwe ukusebenzisa Iprojekthi ayikho evumela ukuba umsebenzisi okanye abanye abantu bakwazi ukufumana ukulandelwa okukhulu okanye ukutya okuninzi kobuninzi bezobubanzi nokuhamba. Umsebenzisi makangasebenzisi iComputer yokuprinta okanye ukukhuphela okukhulu imifanekiso, idatha okanye enye into.
Kwakhona ngokwemiqathango yeGoogle Maps ithi:
"Awunakukhupha umxholo wokusetyenziswa kwezinto eziphuma kwizinto ezingahambelaniyo neemveliso, njengokuhlela ngakumbi kolunye uyilo, ukushicilelwa kwideskithophu, okanye Sicelo seGIS. "
Uthethwano lwenziwe kwiiforamu ezahlukeneyo, zombini i-ESRI kunye neGoogle Earth, kodwa owona mthombo wesalathiso kwimeko yethu, kuba iPlexScape ngumqambi ogunyazisiweyo yi-AutoDesk, yile nto ithethwayo kwakule ndawo inye, kanye xa isixhumi elebhu. Nangona ibhlog yakho ingelulo uluvo olusemthethweni lwe-AutoDesk, ishiya abasebenzisi abagcina ukudideka kwezi ngxelo zikhankanywe ngasentla kuphela.
Soctt Shpeppard sabuya kodwa wathi inxalenye lomthetho kunika apho wacaphula nkampani isivumelwano ne Google ukuphumeza uphuhliso API ye Google Earth equka oko Civil3D kunye AutoCAD Map yenza ungenisa imodeli digital kunye imifanekiso
I-Autodesk inelayisenisi evela kwi-Google evumela i-Autodesk ukuba isebenzise i-API ye-Google Earth ngeemveliso ze-Autodesk; Noko ke, ezi nkcukacha lokuphunyezwa lwethu kunye ngokwamaphepha-mvume Autodesk ngenxa ukusetyenziswa kobugcisa wesithathu ziyimfihlo, kwaye bengekho inkululeko ukwabelana ngolwazi kunye Customers Loo.
abasebenzisi End ufuna ukusebenzisa Google WHO Earth imifanekiso ngaphandle iimveliso Autodesk (kubandakanywa okuwisa ibe izicelo Yawo) kufuneka Kakade ziyokufumana iimvume ukusuka Own Google yabo Google Thobela ngokwemiqathango zokusetyenziswa.
Oku ucacisa Kwakhona oko abasebenzisi isiphelo ofuna ukuzenza imveliso eyenziwe ukusuka apho, luxanduva lwabo kwaye zifuna mvume ngqo ne Google kumkhawulela loo magama.
Ke, njengoko iPlex.Scape luphuhliso kubuchule be-AutoCAD, igutyungelwe phantsi kwesi sivumelwano. Ewe i-Plex.Earth kukuba i-Civil3D ayisebenzisi loo nto, kodwa i-AutoCAD kuphela enokuba yi-LT. Kwakhona umfanekiso uza ngemibala kwaye kukho ukhetho lokukhetha isisombululo sokukhuphela.
Njengoko ndikhankanywe kwinqaku lam elidlulileyo, oku kuya kuba esinye sezixhobo ezincedo kakhulu abasebenzisi beSpanishi. Umhlaba ungathengwa ngokuthe ngqo kwindawo leyo PlexScape okanye kumthengisi we-AutoDesk. Kwimeko yeLatin America, bajonge abasasazi balapha.
Ubugebenga besoftware, isihloko esingapheliyo
Ewe kusemthethweni. Ewe, yenziwa phantsi kwesivumelwano i-AutoDesk esinayo kuGoogle.
KUNYE OKUYOMTHETHO KANYE OKANYE?